မီးရထားသည်Balıkesirသို့ပြန်လာ - RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး10 BalikesirBlack ကရထားBalıkesir Returns
07 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 10 Balikesir, ရထားလမ်း, လှိမ့်စတော့ရှယ်ယာ, အထွေထွေ, စက်ခေါင်း, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
Manisa မြူနီစီပယ်ယူနွတ် Emre ၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအဆိုပါငှားရမ်းရေနွေးငွေ့ခေါငျး Balikesir ပြန်လည်ရောက်ရှိ။
ခဏတစ်လွန်ခဲ့တဲ့ AK ပါတီ Balikesir လက်ထောက်မင်္ဂလာ Aydemir, တပြည်လုံးကိုရထား Manisa အားပေးပြီးမှမိမိအထုတ်ပြန်ချက်နှင့်အတူBalıkesirကြောင့်ပြန်လည်အသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ Aydemir ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်; "ဒီမြေယာရထားကျွန်တော်တို့ရဲ့Balıkesir'iBalıkesirဘူတာ Cengiz Topel လမ်းအဝင်ဝမှာပြပြနေချိန်တွင်လယ်၌ဖြစ်သောအမျိုးသားအိမ်ခြံမြေအထွေထွေညွှန်ကြားမှုလွှဲပြောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲအပေါ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့၏သင်္ကေတများထဲကတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ကိုတူရကီပြည်နယ်မီးရထားအထွေထွေမန်နေဂျာ၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုနှစ်ဦးစလုံးကျနော်တို့ကျနော်တို့ပြည်နယ်မှာmutakıpရဖို့မှီဝဲပါတယ်လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်မတိုင်မီပူးတွဲပြုမိကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ဖို့ရှိသည်။ အခုတော့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတိတ်တဆိတ်အဆင်တန်ဆာအတွက်ဖျက်သိမ်းအမှုကိုပြုခံရသောဓာတ်ပုံများကို "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ tren'i LAND" တွင်မြင်ကြသကဲ့သို့ငါတို့သည်တိုင်းခြေလှမ်းအတိုင်းလိုက်နာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်အမှတ်နောက်တဖန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့Balıkesir'iထိုက်တန်ပါတယ်တဲ့ထုံးစံ၌နေရာတစ်နေရာယူနေသည်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်အဖြစ် 30 သြဂုတ်လအောင်ပွဲခံနေ့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပူနွေးခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်စောင့်ရှောက်သောငါတို့ဒေသခံစာနယ်ဇင်းများ၏ပုံမှန်ကိုယ်စားလှယ်များကျွန်တော်တို့ကိုထောကျပံ့ပေးသူကိုဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ငါတို့မွို့တန်ဖိုးများကိုဘာသာရပ်, အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူချင်းနိုင်ငံသားများအားလုံးBalıkesirliနှင့်အတူထွက်အတိုင်းလိုက်နာ, ငါတို့Balıkesir'i TCDD ယေဘုယျကျွန်ုပ်တို့၏မန်နေဂျာဧရိယာမန်နေဂျာ၏ sensitivity ကိုမှလစျြလြူရှုကျန်ကြွင်းသောငါတို့သည်ငါ "ပထမဦးဆုံးအရပ်မှလှူဒါန်းခဲ့ခံရဖို့သိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြောင်းသရုပ်ပြထားပါတယ် သူကပြောပါတယ်။
ဧဝံဂေလိတရားကိုမှBalıkesir! .. ရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်း Returns 23 / 05 / 2019 တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု Yunusemre Manisa မြူနီစီပယ်အတွက်ရေနွေးငွေ့ခေါငျး Balikesir မှပြန်လာသောပါလိမ့်မည်ငှားရမ်းထားသော။ TCDD2557 နှင့်အတူ Yunusemre မြူနီစီပယ်အတွက် protocol ကိုအတူတထောင်ပေါင် Manisa, စက်ခေါင်းငွေ့ခေါ်ဆောင်သွားBalıkesirမှပြန်လာသောလဲလှယ်အတွက်ငှားရမ်းခြင်းနှင့် KDV ပေါင်းတစ်နှစ်အကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာများအဆိုအရ Balikesir မြို့တော်ဝန် Yucel Yilmaz များ၏တုံ့ပြန်မှုပြီးနောက်အတွက်အရှိန်မြှ။ နည်းဥပဒေ၏ရလဒ်ပြန်လည်ရေနွေးငွေ့ခေါငျးကားလမ်းဖွစျလိမျ့မညျအဖြစ် Yilmaz သင်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါမီးရထားဘူတာမှာစက်ခေါင်းရှိရာတက္ကစီရာထူးဧရိယာထဲမှာထည့်ထားလိမ့်မည်, ထိုသို့ပြုလုပ်ပြသပါလိမ့်မည်ဤနေရာတွင်အကြံပြုခဲ့သည်။ (Balikesirxnumxsaat)
Balikesir မေးတယ်: ဘယ်မှာ Bursa-Balikesir-Izmir မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထား? 06 / 02 / 2012 Bursa-Balikesir-Izmir မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထား: တကယ်တော့ ... ကျွန်တော်ကိုပြင်ဆင်စီမံကိန်းများကိုသုံးပါနှင့်အဓိပ္ပာယ်တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်းကို defining ပေမယ် Bursa အတွက်အဆုံးသတ်ပါဘူး, စီမံကိန်းနှင့်အညီ၏ပထမဦးဆုံးလေလံထွက်သယ်ဆောင်။ သောကြောင့်, Bursa, Balikesir နှင့် Izmir ထိုအရပ်မှကြက်အပြီး။ ထို့ကြောင့် ... အဓိကအား Izmir အတွက် Aegean အိမ်ခြံမြေမှအစ္စတန်ဘူလ်မှအမြန်ဆုံးလမ်းအောင်မြင်ရန်စျေးအသက်သာဆုံးလမ်းသယ်ဆောင်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားအပါအဝငျ။ သို့သော် ... အခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းကိုနူးညံ့သာ Bursa-Yenisehir အကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီထို့နောက် superstructure နူးညံ့သောအမှုကိုပြုလျှင်, ထို့နောက်လျှင် Yenisehir-Bilecik ပြည့်စုံလိုင်း Bursa-တူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ... Bursa, မြို့နှင့်ဒေသ၏အနောက်ဖက်ကနေမြန်နှုန်းမြင့်ရထား ...
တူရကီ, Balikesir မီးရထားဝန်ဆောင်မှုများကိုဖျက်သိမ်း